Maal-geliyihii Burcad badeeda Soomaaliya oo lagu qabtay Brussels iyo dacwad lagu soo oogay – Radio Daljir
Oktoobar 14, 2013 10:21 b 0
Brussels, October 14, 2013 – Hay?adaha garsoorka dalka Belgium ayaa dacwad ku soo oogtay Maxamed Cabdi Xasan (Afweyne) oo ka mid ahaa hugaamiyaashii sar sare ee Burcad badeeda Soomaaliya, xili sabtidii ina dhaaftay lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee Brussels.
Wakaalada wararka ee Belgium loona yaqaano BELGA ayaa shaacisay in hugaamiyaha lagu qabtay garoonka Brussels isagoo la socday diyaarad ka timi Nairobi, maanta oo isniin ah ayaa sidoo kale waxaa soo baxay warar sheegaya in baaris dheer kadib dacwad lagu soo oogay Afweyne.
Wakaalada wararka ee AFP oo wax ka qortay xarriga hugaamiyihii gobollada dhexe ee Burcad badeeda Soomaalida ayaa sheegtay in loo haysto dembiyo dhowr ah oo ay ku jiraan, in uu ka dambeeyey afduub loo gaystay Markab laga lahaa Belgium sanadkii 2009-kii.
Qaramada midoobey warbixin ay soo saartay sanadkii hore ayaa lagu sheegay Maxamed Cabdi Afweyne in uu ahaa hugaamiyaha ugu maal-gelinta iyo awoodda badan falalka Burcad badeednimo ee ka dhaca gobolka iyo xeebaha ka fog.
Dowladdii KMG ahayd ee Soomaaliya ayaa dejisay qorshe balaaran oo uu qayb ka ahaa Afweyne kaas oo dhigayey in hub ka dhigis iyo dhaqan celin loo sameeyo wiilasha ku jira falalka Burcad badeednimo, wakaaladaha wararka ayaa sheegaya in lagu muransan yahay sida uu noqon doono qorshahaas.